Ny Apple Watch dia tsy miasa afa-tsy amin'ireo mpampiantoka voamarina | Vaovao IPhone
Ny Appel Watch dia mampiasa ny fenitra Qi hiampangana dia efa ela no fantatra, saingy alohan'ny hitehirizan'ny fanapahan-kevitry ny orinasa hampiasa fenitra amin'ny fibaikoana ny fitaovany, tohizo ny famakianao, na eo aza ny mety ho izy tsy ho afaka hampiasa charger Qi ianao hamerenana ny Apple Watch, satria i Apple dia nanova an'ity haitao ity mba tsy hisy mpampiroborobo ny maro (sy mora) izay eo amin'ny Internet afaka miasa miaraka amin'ny famantaranandronao sarobidy.
Ny fenitra Qi dia niseho efa ela izay novolavolain'ny Wireless Power Consortium ho an'ny famindrana herinaratra amin'ny alàlan'ny fidirana lavitra (hatramin'ny 4 cm). Izy io dia misy emitter, izay ny base charge, ary ny mpandray, izay ilay fitaovana tokony homena vola. Ity Wireless Power Consortium ity dia misy mpamorona toa an'i Asus, HTC, Huawei, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung, ary Sony, fa tsy Apple. Izany no nahagaga ny vaovao nampiasan'ny charger Apple Watch an'ity haitao ity. Ny consortium mihitsy no nanamafy an'io:
Ny charger tafiditra ao amin'ny Apple Watch dia mampiasa ny fenitra Qi, fa ny marika kosa tsy nanamora ny fitsapana fiaraha-miasa. Mino izahay fa mampiasa ny kinova 1.1.2 an'ny rafitra izy ireo saingy novaina ny rindrambaiko mba tsy hiara-miasa amin'ny mpandefa entana hafa.
La ny fanovana dia tsy maintsy natao tamin'ny ambaratonga Apple Watch, izay handà ny fifandraisana misy fiampangana avy amin'ny charger tsy ofisialy. Raha ny marina dia miasa miaraka amin'ny fitaovana hafa mifanaraka amin'ny fenitra Qi ny charger an'ny Apple, izay toa manamarina izany. Amin'izao fotoana izao, tsy misy olona gaga fa miasa toy izany i Apple ary manery ireo mpanamboatra kojakoja ho an'ny fitaovany mba tsy maintsy hamakivaky ilay boaty hahazoana ny fanamarinana ny fifanarahana amin'ny iPhone, iPad, iPod na Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple Watch ihany no miasa amin'ny charger voamarina
Ahoana ny fomba hanampiana dikanteny ho azy ao amin'ny Plex
Apple Pencil dia misy adiresy tendro faharoa sy adaptatera-USB